Boeing inozivisa hutungamiri inogadziridza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Boeing inozivisa hutungamiri inogadziridza
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
David L. Calhoun akashanda semutungamiri weBoing uye CEO kubva muna Ndira 13, 2020
Boeing anotambanudza makore-65 emudyandigere wekambani kusvika pamakore makumi manomwe makumi manomwe kuMutungamiri neMukuru
Executive VP, Enterprise Operations uye CFO Gregory D. Smith kuenda pamudyandigere kubva kukambani
Boeing irikuita tsvagiridzo yemutsivi waVaSmith
Boeing Company nhasi yazivisa kuti Board of Directors yavo yawedzera makore makumi matanhatu nemashanu ekubatira pamudyandigere kusvika pamakore makumi manomwe makumi manomwe kuMutungamiri uye Chief Executive Officer (CEO) David L. Calhoun. Mr. Calhoun, makore makumi matanhatu nemasere, vakashanda semutungamiri weBoing uye CEO kubva muna Ndira 65, 70.
“Pasi pehutungamiriri hwakasimba hwaDave, Boeing yakwanisa kufamba nenzira yakanyanya kunetsa uye yakaoma munhoroondo yayo refu, "akadaro Sachigaro weBoeing, Larry Kellner. "Kuzvipira kwake mukumutsiridza kuzvipira kwekambani mukuchengetedza, mhando uye pachena kwave kwakakosha mukuvaka mutongi uye kuvimba kwevatengi sezvo Boeing ichidzorera 737 MAX kubasa. Uye, mukutarisana nematambudziko asina kumboitika akaunzwa nedenda repasirese, akatora matanho anoshanda kuti ave nechokwadi chekuti Boeing inoramba yakamira zvine mutsindo mukugadzirisa indasitiri yendege. Tichifunga nezvekufambira mberi kwakakura kwakaita Boeing pasi pehutungamiriri hwaDave, pamwe nekuenderera mberi kunodiwa kuti tibudirire muindasitiri yedu yekutenderera kwenguva refu, Bhodhi rakaona kuti zviri zvakanakira kambani nevari kuita nayo kubvumidza Board naDave anochinjika kuti aenderere mberi nebasa rake kupfuura zera rakafanira rekambani rekurega basa. ”
Nepo chiito cheBhodi chakatambanudza zera rinofanirwa rekurega basa kuna Mr. Calhoun kusvika Kubvumbi 1, 2028, hapana nguva yakatarwa inosanganisirwa nebasa rake.
Boeing akazivisawo kuti Executive Mutevedzeri Wemutungamiriri, Enterprise Operations uye Chief Financial Officer Gregory D. Smith afunga kuenda pamudyandigere kubva kukambani, kutanga muna Chikunguru 9, 2021. Boeing iri kuita tsvagiridzo yaVaSmith.